Antonio Conte oo kahor finalka FA Cup iska diiday inuu ka tagayo kooxda Chelsea – Gool FM
(Chelsea) 18 Maajo 2018.Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa kasoo muuqday shirkiisa jaraa’id kahor inta aysan Manchester United kula ciyaarin finalka FA Cup habeen dambe Wembley Stadium.
Waxaa jiray warar saxaafadeed dhowr ah ee sheegaya in Antonio Conte uu ka tagi doono Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedka sababa la xiriira khilaafka kala dhexeeya maamulka kooxda Blues.
Tababaraha Talyaaniga ayaa si caqligal ah uga jawaabay su’aashii suxufiyiinta kadib mrkii wax laga weydiiyay in finalka FA Cup-ka uu yahay kiisii ugu dambeeyay uu leylin doono Chelsea.
“Waxaan idin sheegi karaa xaqiiqada waxa aad ku fikireysaan ee ah in kulankan uu yahay keygii ugu dambeeyay aan tababare ka noqon doono kooxda Blues”.
“Aniga ahaan iyo ciyaartoyda wuxuu inoo noqon doonaa kaliya keena ugu dambeeya ee xili ciyaaredkan, intaas kadib waxaad ka war qabtaan, in aan halkan ku joogo heshiis, waana mid aan ku xirnaan doono”.
“Waa inaan diirada saarnaa kulanka beri, nasiibkeena waa mid muhim ah, sababtoo ah xilli ciyaareed adag ayaan soo qaadanay, laakiin si fiican ayaan u dhameyn karnaa hadii aan koob ku guuleysano, mar walba muhim ayay u tahay ciyaartoyda, tababaraha iyo taageerayaasha inay koob xili ciyaareedka kaga dhameystaan”.